စိန်အများဆုံး စုဆောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမိသားစု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စိန်အများဆုံး စုဆောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမိသားစု
စိန်အများဆုံး စုဆောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမိသားစု
Posted by ႏြယ္ပင္ on Nov 26, 2010 in Myanma News, News | 25 comments
န္အမ်ားဆုံး စုေဆာင္းတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမိသားစု
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုသည် တန်ဖိုးကြီးစိန် ဝယ်ယူ စုဆောင်းမှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နှစ်တာ အတွင်း ဝယ်ယူသော စိန်တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ဝ ထက် မနည်းကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိန်ကုန်သည်ကြီး တဦး က ခန့်မှန်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
“စိန် တန်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း၂၀ဝ ဆိုတာက ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်ကနေ ၂၀၁ဝ အထိ ဝယ်ခဲ့တဲ့ ပမာဏကိုပဲ ခန့်မှန်းတာပါ။ ၂၀၀၄ မတိုင်ခင်တုန်းက အခြေအနေကိုတော့ မသိဘူး”ဟု ယင်းကုန်သည်က ရှင်းပြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုသည် “စိန်” ကို အလွန် နှစ်ခြိုက်သူများ ဖြစ်ကြပြီး စိန် လက်ဝတ် ရတနာများကို ဦးစားပေး ဝယ်ကြကြောင်း၊ တလုံးလျှင် ဒေါ်လာ ၅ သိန်း ခန့်(ကျပ် သိန်း ၅၀၀ဝ ခန့်)တန် စိန်များဖြင့် စီခြယ်ထားသော လည်ဆွဲ ဘယက် တခုကို မကြာသေးမီက ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ စိန် လက်ဝတ်ရတနာ အပြင် အရည်အသွေးကောင်း စိန် များကိုလည်း တလုံးချင်း ဝယ်ယူစုဆောင်းလေ့ ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ စိန်ကုန်သည် အသိုင်းအဝန်း က ပြောဆိုကြသည်။
“ဗိုလ်ချုပ် မိသားစုတွေထဲမှာ စိန် အများဆုံး ဝယ်တာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မိသားစုပဲ။ နှစ်လ၊ သုံးလခြား စိန် ဝယ်တယ်။ စိန် ဝယ် ယူတဲ့ နေရာမှာ ဝယ်မယ့် တန်ဖိုးကို ကြိုတင် အကြောင်းကြားပြီး ပစ္စည်း ရှာခိုင်းတယ်”ဟု အထက်ပါ ရန်ကုန် စိန်ကုန်သည် က ဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုသည် စိန် ဝယ်ယူရာတွင် ဗေဒင် ယတြာများ ဆောင်ရွက်ပြီး နေ့ကောင်းရက်မြတ် ရွေးကာ ဝယ်ယူကြောင်း သိရှိရသည်။
“စိန် တန်ဖိုး ဘယ်လောက်ဝယ်မယ်၊ ဒါ တည်မြဲနိုင်သလား၊ ဝယ်သင့်သလား၊ ဝယ်သင့်ရင်လည်း ဘယ်လိုအချိန်၊ ဘယ်လို နက္ခတ် မျိုး ပေါ်တဲ့အချိန်မှာ ဝယ်သင့်သလဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အခါတော်ပေးတွေကို မေးတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် စိန် လာပေးမယ့် စိန် ကုန်သည်ကိုလည်း အဝတ်အစား ဘယ်လိုမျိုး ဝတ်လာရမယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားလေ့ရှိတယ်”ဟု စိန် ကုန် သည်ကြီး တဦးကလည်း ပြောပြသည်။
စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇ သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုအတွက် နာမည်ခံ စီးပွားရှာ ပေးနေရပြီး အဆိုပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှနေ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မိသားစုအတွက် လစဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းချီ၍ ပုံမှန် ဝင်ငွေရရှိနေကြောင်း၊ ပြည်သူပိုင် ရေနံနှင့် သဘဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိသော ဝင်ငွေများကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်း ရွှေ နှင့် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ နှစ်ဦးကသာ အဓိက စီမံခန့်ခွဲ ကိုင်တွယ်ကြကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဘက် အသိုင်း အဝန်း၌ ပြောဆိုနေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုအပြင် ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိများ ဖြစ်ကြသည့် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း နှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးရှိန် တို့မှာ လည်း အများဆုံး စိန် ဝယ်စုသူများ ဖြစ်သည်ဟု စိန်ကုန်သည် အသိုင်းအဝန်းမှ သိရှိရသည်။
ယခင် ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် ကျောက်ကပ် ရောဂါခံစားနေရသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ သဘောကျ ချစ်ခင်မှုကိုခံရသဖြင့် ယခုအချိန်အထိ နေပြည်တော် စစ်ဘက် အသိုင်းအဝန်းတွင် ဩဇာအာဏာ ကြီးသော ဗိုလ်ချုပ် တဦး အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ လူယုံတဦးအဖြစ်လည်း ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသည် ဟု နေပြည်တော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝန်းက ဆိုသည်။
ယခု လက်ရှိ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးရှိန်မှာမူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုနှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ အားလုံးတွင် အစုရှယ်ယာရှင် တဦးဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဧရာဝတီ မှဖော်ပြပါသည် ။
တစ်မိသားစုလုံး ခြိုးခြိုးခြံခြံ ခြွေခြွေတာတာ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရတဲ့လစာကို စုပြီးဝယ်တာ နေမှာပေါ့အေ … ညည်းတို့ကလည်း .. ပြောနေကြတာပဲ။
လက်ညိုးညွှန်ရာရေထွက်နေတဲ့ သူ့ခေတ်မှာ .. ပုံတောင်ပုံညာတလွှား ..စိန်ရှာခိုင်းလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
အဲဒီနယ်ရဲ့ဘူမိသက်တမ်းနဲ့.. မီးတောင်နယ်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဆို… စိန်သေခြာပေါက်ထွက်တယ်လို့.. ဘူမိဗေဒပညာရှင်တချို ့ပြောတာကြားဖူးလို့ပါ..။
အခုလည်း ..သက်တန်းနု ..စက်မှုသုံးစိန်အဆင့်တော့ လွယ်လွယ်တွေ့တယ်လို့ ပြောကြတာပဲ..။
ကံကောင်းရင်.. မြန်မာက ကမ္ဘာမှာ ..ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား အပြင်.. စိန်အထွက်ဆုံးပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်..။
တိုးတိုးပြောပါဗျာ.. တစ်ကယ်လုပ်လိုက်လို ့ကျွန်တော် တို ့ယောနယ်လေးပြန်ရင် ဒီတောင်လေးတွေပဲတက်စရာရှိတာ.. ဖြိုထည့်လိုက်လို ့ခက်နေပါ့မယ်..
ပြောရတာမဟုတ်ဘူး.. တစ်ကယ်လုပ်ရင်တစ်ကယ်ဖြစ်နေတော့ တစ်ကယ်လုပ်ရင်လုပ်နေမှာ..
ကျောက်စိမ်းတူးတာနဲ့တင် တောတွေကတုံးဖြစ်၊ မြစ်ကမ်းပါးတွေပြို၊ ဧရာဝတီလည်း တော်တော်အဖြစ်ဆိုးနေပါပြီ။ စိန်ပါထပ်တူးရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ လူနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
အင်း………နည်းစနစ်ပြင်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ စကားမစပ်သိချင်တာလေးတစ်ခု သိသူတွေဖြေပေးပါ။
”နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ အသုံးကို သိခွင့်ရှိသလား”
တို့ကတော့ တစ်နေ့စိန်တလုံးအမြဲစားတယ် … ယုံဘူးလား .. ဒညှင်းသီးစားရေစိန်(စိမ်) ဟဲဟဲ ။
full of goods news says:
တစ်ကယ်တော့သူတို.စုနေတဲ့ စိန်တွေဆိုတာ … ပြည်သူတွေရဲ. ချွေးစက် သွေးစက် မျက်ရည်စက်တွေပါ …..
လောကကြီးမှာ တည်မြဲတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဗျ………….
ဟိုက အကောင်ထည်ဖော်လိုက်လို ့စိန်တူးနယ်မြေလုပ်ချလိုက်လို ့
လူတွေ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပါဦးမယ် ဟွန်း (ဟို အဝါရောင်စပ်ဖြဲဖြဲရုပ်ကလေးတွေဘယ်လိုထည့်ရလဲတိဝူး ကြောကြပါဦး)
အဝါ ရောင် စပ်ဖြဲ ဖြဲ လေး သိချင်ရင် ဘိုလို ပြောင်းပြီး း) အဲဒီလို ပုံစံ ဖြစ်အောင် ရိုက်ကြည့်လိုက် B)
shift + : + P [ ]
shift + : + D [:D ]
shift + ; + ) [ ;) ]
shift + : + ) [ ]
Shift + : + ( [ ] အဲလိုလေးတွေပါခင်ဗျာ
နမူနာ လုပ်ပြမှ မပေါ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ;) ;P
အော် …ဒါကြောင့်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ ….စိန်စီသောလမ်းဖြစ်ခဲ့တာကိုး ….တစ်ဘို့ထဲကြည့်တာကိုး ……
ချမ်းသာလွန်းယင်သေခါနီးအရမ်းသနားဘို့ကောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတယ် ၊ ဒို့မှူးကြီးအလှည်းကလဲနီးလါပြီဆိုတော့ ကာ……..
nwl က ဝယ်ယူစုဆောင်းလို့သာ ရေးပြခဲ့တာ .. လက်ညှိုးထိုးပြီး တောင်းခဲ့တာတွေ .. ခဏငှါးတယ် ဆိုပြီး ပြန်မပေးခဲ့တာတွေ .. ပေးဆိုပြီး ယူခဲ့တာတွေ မပါသေးဘူး .. နောက်ပြီး ဝယ်တယ် ဆိုပြီး ငွေ မရှင်းတာတွေလဲ မပါသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ် .. စုစုပေါင်း (ကျပ် သိန်းပေါင်း ယောယုဝ) လောက်တော့ ရှိမလား မသိဘူးနော် ..
မမရေ သိပ်မပြောနဲ့နော် တော်ကြာ “ဆမ” လာလုနေဦးမယ်
လာလုစရာ မရှိပါဘူးကွယ် .. သိပ်လဲ အထင်မကြီးပါနဲ့ ..
ဆမ ဆိုတာ ဘာလဲ သိလား.. ဆည်မြောင်း ပရောဂျက် ပါမစ်..
အင်းပြောရမယ်ဆို မိုးကုတ်ရတနာကုန်သည်မိသားစုကို သတ်ပြီး ယူသွားတဲ့ စိန်တွေတော်တော်များများပျောက်နေတယ်နော်။ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့။အမှုလက်သယ် လဲမပေါ်ဘူး။တော်တော် ကြိီးကို စွမ်းတယ်နော် ထောက်လှမ်းရေးတွေ။ရန်ကုန်မြိ ု့ရဲ ့အဓိကနေရာမှာဖြစ်သွားတာလက်သယ်မပေါ်ဘူးတဲ့ရှငိ
ထောက်လှမ်းရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကထောက်လှမ်းရေးက နိုင်ငံတကာထက် အတော်ဆုံးလို့
သူတို့က စိန်စု ၊ ပြည်သူတွေက ငစိန်ဆန်တောင် နပ်မှန်အောင် စားရရဲ ့လား:(
ထင်တော့ ထင်သားပဲ အဲသာကြောင့် ဖြစ်မယ်…။ ……………………….